एमसिसीमा एमालेको ‘लिङ्ग’ के ?
यी हुन नेपाल र नेपालीका लागि एमसिसीका ‘घातक’ बुँदाहरु (एमसिसी नेपाली पूर्णपाठसहित)
कांग्रेस सभापतिमा पुनः देउवा विजयी
काठमाडाैं २९ मंसिर । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा विजयी भएका छन् । मंगलबार भएको दोस्रो चरणको मतदानमा डा. शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित हुन् । यसअघि २०७२ मा भएको १३औं महाधिवेशनमा पनि उनशि दोस्रो चरणको मतदानबाटै सभापतिमा निर्वाचित थिए । देउवाले...
खोटाङ पुगेर विप्लवले भने, ‘भोलि पर्सीबाट फेरि ठूलो संघर्षको सम्भावना’ (भिडियाे)
खोटाङ पुगेर विप्लवले भने, 'भोलि पर्सीबाट फेरि ठूलो संघर्षको सम्भावना' (भिडियाे)
काठमाडौं ७ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विनियोजन विधेयक बिहीबार प्रमाणीकरण गरेकी छन्। संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट आजै पारित भइ पेस भएको उक्त विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सांसदहरूको निरन्तरको नाराबाजी र अवरोधका बीच...
नाराबाजीका बिच विनियोजन विधेयक पारित, सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुला
काठमाडौं, ४ असोज । विनियोजन विधेयक २०७८ पारित भएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले सो विधेयक पारित गरेको हो । एमाले सांसदको नाराबाजी चलिरहँदा सो विधेयकलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । एमाले सांसदको नाराबाजीबीच नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मत विभाजन प्रस्तुत गरेका थिए । उनले बहुमतका आधारमा विनियोजन विधेयक...
शेरधन राईले १ करोडमा किन्नुपर्ने गाडीमा साढे ३ करोड खर्च गरेको खुलासा
काठमाडौं ११ भदाै । बिहीबार (१० भदौं) मा मात्र मुख्यमन्त्री पदबाट राजनीनामा दिएका प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता शेरधन राईले सवारी साधन खरिदमा जनताको करबाट उठेको सरकारी रकमको व्यापक अनियमितता गरेको खुलेको छ । उनले मापदण्डलाई कुल्चदै विकास बजेट लगायत अन्य बजेटको पैसा रकमान्तर समेत गरेर बिलासी सवारी...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल विनियोजनमध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु...
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले मुख्य रूपमा तीनवटा विषयलाई आधार मान्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय र त्यसका आधारमा यसबीच भएका सबै काम बदर गरेको हो । यो निर्णयमा संवैधानिक इजलासका...
जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य परामर्श दिने व्यवस्था मिलाएको छ । उमेरका कारण स्वास्थ्य संस्थासम्म जान नसक्ने ती नागरिकलाई गाउँपालिकामा कार्यरत अहेव र अनमीमार्फत घरैमा पुगेर स्वास्थ्य परामर्श सेवा उपलब्ध गराएको हो । वडा नं ४ डम्बर्खुशिवालयबाट शुरुआत गरिएको गाउँपालिकास्तरीय स्वास्थ्य सेवा परामर्श सबै वडामा पु¥याइने गाउँपालिकाका शाखा...